Xildhibaano Wada Mooshin ka dhan ah Guddoomiyaasha degmooyinka Boosaaso iyo Garoowe | SAHAN ONLINE
Xildhibaano Wada Mooshin ka dhan ah Guddoomiyaasha degmooyinka Boosaaso iyo Garoowe
Bidix Duqa Degmada Bosaso Yaasiin Mire iyo duqa Caasimadda Garoowe Xasan Goodir
BOOSAASO – Waxaa magaalooyinka Bosaso iyo Garoowe ka bilowday mooshin la doonayo in xilka lagaga xayuubiyo guddoomiyayaasha degmooyinkaaas Bosaso iyo Garoowe ee Eng Yaasiin Mire Maxamuud iyo Xasan Maxamed Ciise “Goodir”
Masuuliyiintan ayaa lagu eedeeyay xil-gudasho La’aan, Maamul xumo, musharaadka shaqaalaha oo aan la bixin, musuqmaasuq, ixtiraam la’aan xubnaha gollaha degaanka iyo arrimo kale oo farabadan
In ka badan 18 xildhibaan oo ka tirsan gollaha degaanka ee Bosaso ayaa toddobaadkii hore u gudbiyay duqa degmadda Bosaso codsi ay ku dalbanayeen Kalfadhi aan caadi ahayn oo lagaga doodo mooshin isaga ka dhan ah, taasi oo uu ka goos adaygay.
Nuqul ka mid ah codsigii xildhibaanadu ay u gudbiyeen duqa degmadda Bosaso Yaasiin Mire Maxamuud oo soo gaaray Sahanonline, ayaa waxay ku eedeeyeen duqa, Lunsi hanti dadweyne oo ay ka mid tahay Dhismayaal iyo gaadiid, waxay kaloo ku eedeeyeen musuqmaasuq iyo ku tumasho awoodii sharciyeed ee gollaha degaanka
Annago ah xildhibaanada gollaha degaanka wxaanu dalbanaynaa mooshin kalfadhi aan. caadia ahayn, mooshinkaasi oo lidi ku ah guddoomiyaha gollaha shacabka ahan duqa degmada Bosaso Ing Yaasiin Mire Maxamuud” ayaa lagu yiri Codsiga xubnaha gollaha degaanka gudbiyeen
Xubnaha soo gudbiyay mooshinka ayaa sidoo kale u sheegay Sahanonline inuu guddoomiyuhu uu ku fashilmay inuu si joogta ah u bixiyo musharooyinkii shaqaalaha iyo ciidanka, uuna soo gudbiyo xisaabxirada bilaha ah.
Maalintii isku celcelis ahaa waxaa soo gala dowladda hoose Labo boqol iyo Afartan Milyan, Bishii waxay noqotaa Labo bilyan, todo boqol Malyan oo shilin Soomaalia, halka adeega iyo musharka dowladda hoose uu yahay Hal Bilyan oo shiling Somalia, oo aan la helin saddex bilood ee u dambaysay” ayuu yiri mid ah Xildhibaanadii mooshinka gudbiyay.
Mid ka mid ah Xarumaha qashinka oo dad shacab ah lagu wareejiyay
Xildhibaanadu waxay kaloo ay ka cabanayaan maamulka gobolka bari oo soo faragaliyay arrimaha dowladda hoose ee ay waajibka u leeyihii xubnaha gollaha degaanka, iyagoo qayb ka mid ah xildhibaanada ugu hanjabay inay tallaabo ka qaadi doonaan haddii ayan joojin mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha degmadda.
Kalfadhiga gollah degaanka ee Bosaso ayaa la filayay inuu qabsoomo maalinta Isniinta ah oo ku beegan 24ka bisha afraad 2017, hase yeeshee dib ayuu dhacay, mana cadda xiliga uu qabsoomi doono kalfadhiga aan caadiga ahayn.
Mooshinka Ka Dhan ah Duqa Garoowe.
Ilaa 18 Xildhibaan oo ka tirsan Gollaha Deegaanka Degmada Garowe ayaa 18 bishan April waxay dacwad/cabasho ka dhan ah duqa Degmadda Xasan Goodir u gudbiyeen Masuuliyiinta Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland oo ay ka codsadeen in lasoo dhex galo iyaga iyo hogaanka gollaha.
Waxay ku eedeeyay Duqa Caasimadda Maamul Xumo, xil-gudasho la’aan, iyagoo warbaahinta maxaliga ah u sheegay inuu jiri khilaaf keenay dib u dhac ku yimid waqtigii uu ku beegnaa inuu furmo kalfadhigii 5aad ee gollaha oo uu sheegay inay beegnayd 15kii bishii March ee lasoo dhaafay.
Ugu Dambayntii, Sahanonline waxay isku dayday inay wax ka waydiiso eedaymaha loo soo jeediyay guddoomiyayaasha Degmooyinka Bosaso iyo Garoowe, balse uma suurtagalin iyagoo mid ka mid ah labada guddoomiye uu ka cudur-daartay inuu ka jawaabo eedaymahaasi, midna uu qaban waayay telefoonka.
Shaqowacan cidaan shaqadeeda qaran gudan halala xisaabtamo